I-Huajing enamathela ebangeni elenziwe ngezandla i-mica esetshenzisiwe eyenziwe ngesandla, i-untrawhite futhi ikhanya ngokugqamile.Isebenza kabanzi ekugqokeni okuphezulu, ngaphandle kwezici zemvelo ye-mica powder, ukumelana nokushisa kungakhuphukela ku-1200 ℃, ubumsulwa bube yi-99.9% , ukuvimbela ivolumu kuphakeme kakhulu kune-mica yemvelo.
Usayizi Umbala Mhlophe (Lab) Particle Usayizi (μm) Ukuhlanzeka (%) Izinto Magnetic (PPM) Ukuzijabulisa （%） I-LOI (650 ℃) PH Osbestos Heavy Metal Uphiko Ubuningi be-Bulk (g / cm3)
Zokwenziwa Mica nt Tempreture High Resistant ant Heavy antisepstis 、 Izinto zokuvala umoya 、 Ekubunjweni）
200HC okumhlophe ＞ 96 60 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Cha Cha 0.25
400HC okumhlophe ＞ 96 45 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Cha Cha 0.22
600HC okumhlophe ＞ 96 25 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Cha Cha 0.15
1250HC okumhlophe ＞ 96 15 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Cha Cha 0.12
2000HC okumhlophe ＞ 97 7 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Cha Cha 0.11
3000HC okumhlophe ＞ 98 4 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Cha Cha 0.11
Esinemthombo Ibanga Zokwenziwa Mica Powder
I-Huajing enamathela ebangeni elenziwe ngezandla i-mica esetshenzisiwe eyenziwe ngesandla, i-untrawhite futhi ikhanya ngokugqamile.Isebenza kabanzi ekugqokeni okuphezulu, ngaphandle kwezici zemvelo ye-mica powder, ukumelana nokushisa kungakhuphukela ku-1200 ℃, ubumsulwa bube yi-99.9% , i-resistivity yevolumu iphakeme kakhulu kune-mica yemvelo .Okwamanje i-mica yokwenziwa ayinayo insimbi esindayo, nokuqukethwe kwe-iron oxide <0.5%, ngakho-ke inokumelana okuhle kakhulu noshintsho lombala nomsebenzi we-anti-oxidation; Ngaphezu kwalokho, ngenxa yezici zayo zesakhiwo , ayiqukethe i-hydroxyl (OH-), ngakho-ke inevolumu yomoya ephansi kakhulu, nenani elikhulu lesicelo emkhakheni wezingubo zokuphonsa ngokunemba. Njengopende lwangaphandle lodonga, upende wokumelana nokushisa, ukumboza ukwahlukanisa, upende wokumelana nokugqwala, upende wezimpawu zomgwaqo, upende ongangeni manzi, upende omelana nemisebe, upende womkhumbi-mkhathi wokulawula ukushisa, njll.
I-mica yokwenziwa ingeyesistimu ye-monoclinic crystal futhi iyi-lamellar silicate ejwayelekile. Sicela ubheke imininingwane njengokulandelayo:
Nayi imininingwane eningiliziwe mayelana ne-synthetic mica powder:
1.Uzenzele we-mica powder ungumnikazi wobumhlophe obuphezulu (i-Lab> 95) nobukhulu be-factor factor, okwenza ukumboza kucwebezele futhi kumibalabala.
2. Ukumelana kokushisa kwe-mica kungafinyelela ku-1200 ℃, ngenkathi i-mica yemvelo ingu-600-800 ℃, ngakho-ke i-mica yokwenziwa iyisinqumo esingcono sokumboza okushisa okuphezulu.
3. Ukumelana kwayo okuhle ne-acid ne-alkal kuyenza ibe yinto engcono kakhulu yokumbozwa okusindayo kwe-anticorrosive.
4. Ukuzinza kwamakhemikhali okwenziwe ngamakhemikhali kanye nezakhiwo zomzimba, kungasetshenziswa emkhakheni we-aerospace.
5.Ukuthungwa okuhle, ubukhulu obukhulu kusilinganiselo sokuqina, amandla aqinile wokuqina, imisebe kanye nokusebenza kokumelana ne-UV okuphakeme, ukuvikelwa kwemvelo okuluhlaza
Kungakhathaliseki ukuthi ivame ukungcoliswa ngaphandle kokungcola, ukumelana okuphezulu kokulwa nokungcolisa izakhiwo, noma ukuthuthukiswa okunempilo kwezingubo zokuhlobisa, i-mica powder yokwenziwa ingahlangabezana nezidingo zabakhiqizi bokumboza ngenxa yezinzuzo zabo, ezithandwa ngabakhiqizi, ezisetshenziswa kakhulu embonini yokudweba nokumboza.
A. 20 noma 25kgs / PE isikhwama nokwelukiweyo
B. 500 noma 1000kgs / isikhwama se-PP
C. njengesicelo sekhasimende
Olandelayo: I-mica powder emanzi